Alcohol Wipes Factory - China Alcohol Wipes ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
70% Isopropanol သုတ်
75% အရက်စိုစွတ်သော Wiping သန့်ရှင်းရေး
စူပါအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းတရုတ် ၇၅% အရက်ဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးသည့် Wipe 50PCS Pack နှင့် RoHS & FDA ဖြင့်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်
အရည်အသွေးကောင်းကန ဦး လာ; ကုမ္ပဏီသည်အဓိကဖြစ်သည်။ အသေးစားစီးပွါးရေးသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်” ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်မကြာခဏစောင့်ကြည့်လေ့ရှိပြီးတရုတ်ပြည်၏ ၇၅% အရက်ကင်းဆေး Wipe 50PCS Pack သည် RoHS & FDA နှင့်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်ပြီးကျန်းမာရေးကိုအဓိကတာ ၀ န်ယူသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်အမေရိကမှဘွဲ့ရသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ရှိသည်။ နောက်လာမယ့်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ပါ။ အရည်အသွေးကောင်းကန ဦး လာ; c ...
Hot New ထုတ်ကုန်များ China 50 PCS သည်အရက်ယမကာကိုလက်ဖြင့်အရက်ယမကာအားဆေးကြောခြင်းမရှိဘဲသန့်ရှင်းသောသုတ်ဆေးများ (W9) ကိုပိုးသတ်သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ပံ့ပိုးသူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သောစီးပွားရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များအတွက်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်ရန်လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်သည်။ တရုတ် 50 PCS သည်အရက်ယမကာလက်သန့်ရှင်းစေသောအရက်ယမကာများကိုသန့်ရှင်းခြင်းမရှိဘဲသန့်ရှင်းသောသုတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသော client များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမှသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာပါ။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါများသောပရောဂျက်များ ...
စာရွက်ပစ္စည်းမ ၀ တ်၊ ချည်ထားသောဇာစာရွက်အရွယ်အစား ၁၂၀ * ၁၅၀ မီလီမီတာ * ၁၈၀ မီလီမီတာ (ရွေးချယ်နိုင်သည်) ၁၂၀ * ၂၀၀ မီလီမီတာ (စိတ်ကြိုက်) အိတ်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းစက္ကူ + Alv + PE PET + Alv + PE အိတ်အရွယ် ၆၀ * ၈၀ မီလီမီတာတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ - အရက် ၇၅%၊ Ro-water LOGO Easy Wonderful သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်နမူနာများအခမဲ့အသုံးပြုမှုပိုးမွှားများကိုသတ်ခြင်းအတွက်အစာမစားမီလက်နှင့်မျက်နှာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်။ သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ - ၇၅% အရက်သေစာ၊ ရေချို၊ ရက်မပါသောအသွင်အပြင်လက္ခဏာ - တစ် ဦး ချင်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ၊ Sterilization rate 99.99% Function - clean ...
Hot ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, နေကာမျက်မှန်သုတ်, အကောင်းဆုံးမှန်ဘီလူး Wipe, မှန်ဘီလူးသန့်ရှင်းရေး, တစ် ဦး ချင်းစီထုပ်မျက်နှာပြင် Wipe,